घर खेत बगाएर घरबारविहीन बनायो अब यी केटाकेटीलाई कहाँ राख्ने के खुवाउने ? (भिडियो हेर्नुहोस्) - Nepali in Australia
June 17, 2021 autherLeaveaComment on घर खेत बगाएर घरबारविहीन बनायो अब यी केटाकेटीलाई कहाँ राख्ने के खुवाउने ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
धनगढी : कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने राष्ट्रिय बनको बीचमा त्रिपालले बेरेर बनाइएको छाप्रोमा बसाइ छ। पालमा बसेर चार वर्षीय छोरीलाई जाउलो खुवाइरहेकी रुपा बुढामा भोलि छोरीलाई के खुवाउने र आफूले के खाने भन्ने चिन्ता रहेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो।
चुरे गाउँपालिका-६ का ६५ वर्षीय खडक बोहराले आफ्नो १५ रोपनी जग्गा र घर पहिरोले बगाएपछि सुकुम्बासी भई बासस्थानको खोजीमा गाउँका अरूसँगै जङ्गलमा आएको तर यहाँ बसेर बाँचिएला जस्तो नलागेको बताए। आफ्नी श्रीमतीसँगै जङ्गलको बास बसिरहेका बोहरा आफूसँग रहेको अन्न सक्किएको तथा कसैले खानका लागि सहयोग नगरे भोकै जङ्गलमै मर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै भावुक बने।
रोक्नुस् है: आप देखेर मन लोभियो ? सावधान! वजारमा यस्ता हानीकारक आँप बेचिदैछ